विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति बन्न दौड सुरु (को-को छन् दौडमा ?) – Nepali Health
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति बन्न दौड सुरु (को-को छन् दौडमा ?)
२०७३ पुष २३ गते ९:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २३ पुस । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति ( भिसी) नियुक्त हुन आकांक्षीको दौडधुप सुरु भएको छ । प्राडा बलभद्रप्रसाद (विपी) दासको पदावधी गत २० पुसमा सकिएपछि आकांक्षीहरुको दौडधुप सुरु भएको हो ।
प्रतिष्ठानका केही डाक्टर आफ्नो नियुक्तिका लागि काठमाडौँमै बसेर स्वास्थ्य मन्त्रालय धाईरहेको स्रोतको खबर छ । पाँचबर्ष अघि दास उपकुलपति हुँदा अन्य पाँच चिकित्सक प्रतिस्पर्धामा थिए ।
त्यतिवेला प्राडा संगिता भण्डारी, प्राडा प्रल्हाद कार्की, प्राडा बीएन यादव, प्राडा आरके रौनियार र प्राडा सीएन अग्रवाल उपकुलपतिको दौडमा थिए । अहिले पनि उनीहरु नै उपकुलपतिको दौडमा रहेको स्रोतको दावी छ ।
प्राडा संगिता भण्डारी नाक कान घाटी विभागकी प्राध्यापक हुन् । उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति छिन् । प्राडा प्रल्हाद कार्की इन्टरनल मेडिसिन विभागका प्रमुख थिए । तर उपकुलपति दासले आफ्नो पदावधी सकिन एक साता बाँकी छँदा सो विभागबाट कार्कीलाई हटाई प्राडा सञ्जीवकुमार शर्मालाई नियुक्त गरेका छन् । प्राडा शर्मा राजाको शासनकालमा अस्पतालको निर्देशक भएका थिए । अहिले भने उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
प्राडा विएन यादव फरेन्सिक विभागका प्रमुख थिए । उनलाई पनि प्रमुखबाट हटाइएको छ । उनी अलिहेसम्म लाभको पदमा छैनन् । तर, भिसीको दौडमा भने सहभागी हुँदै आएका छन् ।
प्राडा आरके रौनियार रेडियोलोजी विभागमा थिए । उनलाई पनि भर्खर विभागीय प्रमुखको जिम्मेबारीबाट मुक्त गरिएको हो । उनी सिनेट सदस्य पनि हुन् । उनका दाई गौरीशंकर रौनियार कांग्रेस सुनसरीका नेता हुन् ।
प्राडा सिएस अग्रवाल सर्जरी विभागका विभागीय प्रमुख थिए । उनलाई पनि संगै पदमुक्त गरिएको छ । उनी कुनै दलनिकट छैनन् । उनी पूर्व उपकुलपति डा शेखर कोइरालाका समकालिन मानिन्छन् । अग्रवाललाई उपकुलपति बनाउन धरानका केही व्यापारीहरु लागि परेको स्रोतले बताएको छ ।
निवर्तमान उपकुलपति प्राडा दासले सरकारले अर्को कार्यकालको जिम्मेबारी दिए पुरा गर्न तयार भएको बताउदै आएका छन् ।
यता प्रतिष्ठान बाहिरबाट नुवाकोट स्थायी घर भएका डा केदार नरसिंह केसीको नाम अगाडी छ । उनी नेपाली कांग्रेस नेता एवं शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीका भाई र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका काका ससुरा पर्दछन् ।
डा. उपेन्द्र देवकोटाको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि
हजारौंलाई पुन:र्जन्म दिएका चिकित्सक देवकोटाको आज अत्येष्टि गरिँदै
डा. देवकोटाको शोकमा वीर अस्पतालको ओपिडि सेवा आधा दिनमै बन्द
डा. देवकोटाको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि अस्पताल परिसरमा
डा. देवकोटाको निधन पछि न्यूरो अस्पताल परिसर यस्तो देखियो
भोजपुर १९ औँ पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषित
पाँच डाक्टर र एक नर्स डिएसपी बढुवाका लागि सिफारिस
एक युवा डाक्टरको दैनिकी : ‘बिरामीसंग यसरी बित्दछ मेरो बाह्र घण्टा’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री यादवलाई बधाई दिँदै गोदानले बुझायो १९ बुँदे माग